कुन पाठशालामा सिक्ने दिगो सम्बन्धको पाठ ? » देशपाटी
काठमाडौं । न त कुनै कक्षा, न त कुनै तालिम । जीवन भोगाइको क्रममा आफैँले सिक्ने र अनुभव गर्दै जाने कुरा नै प्रेम हो । प्रेम सम्बन्धको विषय सबैको लागि एउटै हुँदैन । प्रेमलाई मान्छेले कसरी बुझ्छ ? त्यसमा निर्भर हुन्छ उसको प्रेमसम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा । एकले अर्काेको कुरामा विश्वास गर्ने र भरोषा राख्ने गर्नुपर्छ । त्यो सबैको जीवनमा लागू हुने सूत्र हो । यसबाहेक अरू सबै मान्छेको सम्बन्ध र उनीहरूको व्यवहारले प्रेम जीवनमा हुन सक्ने उथलपुथलको सम्भावित घटनालाई निर्देशित गर्छ ।
सुमन पन्त र सुप्रिया शाक्यबीचको प्रेम सम्बन्धले ५ औं वसन्त पार गरिसकेको छ । मानभवन ललितपुरमा बस्ने सुप्रिया र अनामनगर बस्ने सुमनको भेट हुने जक्सन हो, शंखमूल पार्क । उनीहरूबीच नियमित त्यही पार्कमा भेट हुन्छ । पहिलो एकरडेढ वर्ष त उनीहरूमा पनि धेरै नै झगडा हुन्थ्यो । सानो कुरामा पनि झगडा गर्ने र एकअर्कामा दुई दिनसम्म पनि बोल्दैन’थे । तर बिस्तारै एकले अर्कालाई चिन्दै गएपछि एउटा रिसाउँदा अर्काेले फकाउने र अर्काे रिसाउँदा अर्काेले फकाउन थाले । त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गयो ।
दैनिक भेटघाट सम्भव भएका र नभएकाहरूको लागि समेत नियमितको सञ्चार सम्पर्क आवश्यक कुरा हो । सम्बन्ध जति कुराकानी ग¥यो उति नै गाढा बन्दै जान्छ । एकले अर्काेलाई घुक्र्याउनु र इत्रिनु पनि सुमधुर सम्बन्धको एउटा उपज हो । आफ्नो केही गुणस्तरीय समय आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकासँगै बिताउनु पनि सुमधुर सम्बन्धको लागि आवश्यक कुरा हो ।
प्रेम सम्बन्धमा धेरै उतारचढावहरू आउन सक्छ । अझ ‘म्याच्योर्र्ड’ नभइसकेको प्रेम सम्बन्धमा झनै धेरै उतारचढाव आउनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले सम्हालिएर परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा ल्याउनुपर्छ । आफू कतिपय समस्यामा गुज्रिएको हुन सकिन्छ । त्यस्ता समस्यामा सुझाव लिनुबाहेक सकेसम्म समस्यामा सामेल नगराउनु नै उपयुक्त हुनसक्छ । कुनै बेलामा सम्बन्धमा आएको समस्या समाधानका लागि अतिरिक्त दबाब र प्रभावको बाटो रोज्नु हुन्न । यसले झनै समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।-अनलाइनखबर